Zviite Kuti Mwari Vawane Mbiri
"Musingaiti chinhu nenharo, kana nokuzvikudza, asi mumwe nomumwe ngaati nomwoyo unozvininipisa, vamwe vanomupfuura iye pakunaka" (Vafiripi 2 ndima 3).
Rimwe Bhaibheri rinotipa ndima iyi zvakajeka. Rinoti, "Pasina chinoitwa negodo. Kana kuzvitsvakira mbiri. Asi mukuzvininipisa. Mumwe nemumwe wenyu achikudza vamwe. Achivatora sevakakosha kudarika iye". Mashoko aya anotirangaridza daka ratinovona muna 1 Madzimambo 18. Daka iri rakanga ramuka pakati paMuprofita Eriya. Nevaprofita venhema. VaBhaari.
Kune vakasiongorora nhoroondo iyi. Vakasainzwisisa zvakanaka. Vachifunga kuti Eriya ndiye aingotsvaka hake mbiri. Asi ichi hachisi chokwadi. Muprofita uyu akaraira Mambo Ahabhi. Kuti vaunganidze Vaisiraeri vose. Pamwe nevaprofita vevamwari venhema. Aida uti vose vauye kugomo reKameri. Vaprofita mazana mana nemakumi mashanu vacho. Vakanga vari vaBhaari. Vamwe mazana mana vacho. Vakanga vari vaAshera. Vaprofita vose ava. Vakanga vakafanira kugadzira chipiriso. Vagoraira kuti moto uburuke kubva kudenga. Ugopisa chipiriso ichi. Akanga achazogona kuita izvi wacho. Ndiye akanga achazozikanwa semuprofita wechokwadi.
Boka rimwe nerimwe rakatsvaka handira. Ndokuiisa parubairo. Ndokudana kuna mwari waro. Kuti atume moto kubva kudenga. Vaprofita vaBhaari vakadana chose. Vakachema. Vakazvicheka cheka. Asi mwari wavo haana kuvadavira. Eriya ndokuzouyavo. Ndokutanga adira mvura pachipiriso chake. Ndokubva adana kuna Mwari. Mwari vakabva vatuma moto. Uchibva kudenga. Moto uyu wakabva wapisa chipiriso ichi chose.
Verenga mashoko akazotaurwa naEriya mushure. Ari muna 1 Madzimambo 18 ndima 36. Akati, "... Jehovha, Mwari waAbhurahama, Isaka naIsraeri, ngazvizivikanwe nhasi kuti ndimi Mwari munyika yeIsraeri uye kuti ini ndiri muranda wenyu, uyewo kuti ndaita zvinhu zvose izvi sezvamakandirayira". Eriya akanga ari kuita zvaakanga arairwa naMweya vaMwari. Akanga asiri kutsvaka kuwana mbiri. Mwari ndivo vakanga vamuraira kuita izvi.
Chiongorora zvakazoitika. Vaisiraeri vakabva varegera kuvimba naAhabhi. Vakatanga kunamata Mwari. Sezvavakanga varairwa naEriya. Zvakaitwa naEriya izvi. Ndizvo zvakaita kuti vanhu vape Mwari mbiri. Nokuvaziva kuti ndivo vakanga vari Jehovha Mwari waIsiraeri. Saka zvinhu zvose zvaunoitira Mwari. Hazvifaniri kuva zvekuzvitsvakira mbiri. Zvinofanira kuita kuti vanhu vazive kuti ivo ndivo Mwari. Unofanira kudzidza kutevera Mweya Mutsvene. Mazano avo unoawana muShoko raMwari. Ndiro raunofanira kushandisa kuita zvinhu. Unofaniravo kuita zvinhu wakamira pariri. Zvinova ndizvo zvakaitwa naEriya. Kana ukadero, mabasa ako. Tsika dzako. Nezvishuvo zvako. Zvinozoita kuti Mwari vawane mbiri. Zvinozoita kuti vazikanwe saMwari.
Baba vandinoda. Shoko renyu ndicho chiedza chiya. Chinotungamirira pfungwa dzangu. Nezvose zvandinoronga. Ndicho chinonditungamirira muhupenyu. Kuti ndirarame semunhu werudzi rweVamwari. Ndinotevera imi moga. Uye moyo wangu hauzvikudzi. Shoko renyu ndiro rinonditungamirira. Ndiro rinondipa chiedza. Nekunditaridza zviri muHumambo hwenyu. Zvisingavonekwi nevanhu venyika ino. Muzita raJesu. Ameni.